Uncategorized Archives » Myanmar Peace Monitor
‘ကော်’ ရိုးရာဓလေ့ နယ်မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပိုမိုအားကောင်းလာရန် ပြင်ဆင်
‘ကော်’ ရိုးရာဓလေ့ နယ်မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပိုမိုအားကောင်းလာရန် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်လုပ် ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ဖားအံခရိုင် လေးဝါး(လော်ခီးလာ)တွင် မေလ ၂၉ရက်မှ ၃၀ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သည့် ‘ကော်’ ရိုးရာဓလေ့ နယ်မြေစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ၌ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အလှူရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်များ၊ ကေအဲန်ယူထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၅၆) ဖွဲ့မှ စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ်(၅၁၉) တက်ရောက်သည့် ၎င်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ထိုသို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏ ပြောခွင့်ရသူ ပဒိုစောနေသဘလေးက “ဒီကနေ့ သွားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု ဖြစ်စဉ် အပေါ် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်က အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည် ဆောက် ရေးဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ဖက်မှာက ဒေသအတွင်း ကိုယ်ပိုင်စီမံအုပ်ချုပ်မှု […]
Category: Peace related news headline, Uncategorized
Shan Armed Group Kills At Least Four Ethnic Pa-O in Shooting As clashes continue, dozens of displaced refugee students missing school in Shan နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ ဆန္ဒရှိကြောင်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ထုတ်ပြန် အစိုးရနဲ့ တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ KNU ပြန်လည်ပါဝင်လာနိုင်ဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်မည် ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အရေး ထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်ဖို့ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ပြော မိုင်းဖုံးဆရာတော် တရားဟောစင်မြင့် ဖျက်ဆီးခဲ့မှု ဝ တပ်ဖွဲ့ ပြန်တောင်းပန် ထောင်ချခံရသော စစ်ရှောင်အရေး ဆန္ဒပြသူသုံးဦးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် သမ္မတထံ ကချင်ဒီချုပ်အမတ်များ စာပို့တောင်းဆို
နေရပ်မပြန်နိုင်သေးသည့် ကန်ညီနောင်စစ်ရှောင် ၂၀၀ကျော် ခက်ခဲစွာ နေထိုင်စားသောက် နေရ
ဖာပွန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်-KNLA တပ်မဟာ (၅) လက်အောက် ခံတပ်နှင့် အစိုးရစစ်တပ်တို့ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားသော ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ထွက်ပြေး တိမ်း ရှောင်လာခဲ့ကြရသည့် ကန်ညီနောင်ကျေးရွာမှ စစ်ဘေးရှောင် ၂၄၅ ဦးမှာ ယနေ့ထိ နေရပ်သို့ မပြန်နိုင် သေးကြောင်း မြိုင်ကြီးငူ စခန်းတာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။
Myanmar Gives Message to International Youth for Peacebuilding
Talk Concert as Cultural Exchange between Myanmar and South Korea to Seek Construction ofaPeaceful World ​ Association of Southeast Asian Nations(ASEAN) has emphasized the need for cultural exchanges between ASEAN members and Korea since 2017 when the “ASEAN-ROK Cultural Exchange Year” was designated in celebration of its 50th anniversary. The partnership between South […]
Around 145 representative officials to the United Nations of the respective countries including Canada, Austria, Colombia, the Republic of Senegal, and the State of Qatar gathered to holdadialogue on the agenda of peace and development at UN Headquarters in New York on May 31st. Organized asacollective effort of the diverse sectors […]